Top ise Android SD Kaadị Managers
> Resource> Android> Top ise Android SD Kaadị Managers
Gam akporo igwe kpamkpam nwee oké mgbanwe mkpanaaka nkwurịta okwu ahụmahụ site akpọchi ọnụ ụzọ ámá nke ọtụtụ ngwa, atụmatụ na egwuregwu. Na a na-ekwu, Android SD kaadị oru eje ozi dị ka ndị kasị mma na ngwá ọrụ exporting na ichebe data na gị na desktọọpụ. Ke ibuotikọ emi m ga-depụta n'elu ise oru nke bụ kasị pụrụ ịdabere na-adaba adaba.
All nke n'elu ise Android SD kaadị njikwa ngwa akwado Windows OS ma na-ọma na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ika nke Android smartphones ma ọ bụ a mbadamba.
1. Mobisynapse - a multipurpose SD kaadị njikwa Android ngwa
Iji jikọọ ihe gam akporo ngwaọrụ na PC, SD kaadị njikwa Android ngwa - Mobisynapse bụ ezi nhọrọ. Mobisynapse bụ ma a usoro ngwá ọrụ na a ịba uru ngwa n'ihi na Android ngwaọrụ. Ọ syncs Outlook kọntaktị nkọwa, ozi, kalenda, ncheta, ndetu na ihe aga-eme na-eme ma na ị nwere ike jikọọ gị handset ka PC site eriri USB ma ọ Wi-Fi. Ọ na-enye data ndabere na Iweghachi nhọrọ kwa. Mobisynapse bụ a na achị SD kaadị njikwa Android ngwa n'ihi na ọ rụrụ ọrụ dịgasị iche iche dị ka syncing Outlook kọntaktị, foto / videos. Ya onye ọrụ interface bụ smart na n'ụzọ kwụ ọtọ.
Kpọmkwem syncs data na Outlook na-adịghị ahu nagide Google ana-akpo.
Easy nyochaa Android usoro ọmụma site PC.
Free mbipute dị.
Kalinda synching mgbe ụfọdụ dabeere Mobisynapse.
The free version anaghị akwado na akpaaka mmekọrịta site USB na Wi-Fi
2. MOBILedit - a ukwuu kenkwukorita Android SD kaadị njikwa
MOBIledit bụ ihe kasị ọrụ-enyi na enyi Android SD kaadị faili. Ọ na-enye ihe dị mfe Portal jikwaa ekwentị gị data na PC na-enyefe data si na-abụghị Android handset na iOS ngwaọrụ. Nke a vasatail Android SD kaadị njikwa-ejikọ gị na ngwaọrụ PC site na eriri, Wi-Fi, Bluetooth na / ma ọ IrDA. Ozugbo njikọta, ọ ga-ntabi ịchọpụta ngwaọrụ na gị workstation na mmekọrịta media faịlụ, kọntaktị na ndepụta, ndenye kalịnda, na SMS ozi-akpaghị aka. A na-enye aka ọkachamara ga na-apostle ị ofụri echichi na syncing usoro. Ọrụ nwere ike conveniently nweta ugboro ugboro ji faịlụ mgbe na laa. Ọ bụrụ na ị na-ejikọta site na Wi-Fi na ị chọrọ wụnye MOBILedit Connector App kwa.
Mfe ejisie data.
Nyefee data na site na mgbanwe ụdị
Kwado ejikọta iPhone na Android site Wi-Fi
Send, Archive, searche na ebipụta ozi ederede
Update ekwentị data na PC naanị.
Adịghị egosi na multi-ubi ndetu nke kọntaktị.
Adịghị enye Download Centre.
3. MyPhoneExplorer - a SD kaadị manịja Android na pụrụ iche portability atụmatụ
SD kaadị manịja Android ngwa nwere ọtụtụ ma MyPhoneExplorer bụ na ọnụ ọgụgụ atọ na anyị na ndepụta n'ihi na nke handiness na arụmọrụ. Nke a SD kaadị njikwa Android ngwa n'ihi na Windows OS syncs ụdị nile nke data site na Android ma ọ bụ Sony Ericsson ekwentị gị PC n'otu oge na-eke ya ndabere. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke handsets ọbụna agadi-akwụkwọ tent dị ka K-700 na-ejikọ PC na ekwentị site infrared, Bluetooth na USB. Ọ bụ a obere ngwá ọrụ onwe ebe-azọpụta ya na a USB mbanye bụ na o kwere omume. Ọ nwere ike na conveniently-gị ọrụ ndepụta, kọntaktị na nchekwa data na ndetu / ncheta synchronized. The ngwa na-enye dị iche iche na taabụ nke ọ bụla udi nke data dị ka a iche iche taabụ maka kọntaktị na nhazi nke mere na ị na-ahazi n'akụkụ dị iche iche nke ekwentị gị mfe. Na ya ọhụrụ version, ngwa si ​​ndakọrịta na Symbian ngwaọrụ e enwekwukwa na ọ na-akwado UIQ3-ekwentị mkpanaaka na ugbu a.
Mfe rụrụ multitasking.
Nyo nhọrọ dị na faịlụ syncing.
Mmelite na-emepụta a data ndabere ọbụna mgbe ekwentị na-adịghị ejikọrọ.
Tricky nwụnye usoro. The ngwa nwere ike ijide gị anya-nche site na àjà-abaghị uru software na i nwere ike pịa Ee. Ya mere, kpachara anya!
4. AirDroid - ndị kasị SD kaadị manịja Android
AirDroid bụghị nnọọ ọzọ ngwa ọ bụ nkà ihe ọmụma na eliminates ojiji nke USB cables ruo mgbe ebighị ebi. Nke a free SD kaadị manịja Android ájá Studio-enye gị ohere jikwaa ekwentị gị na ihe nchọgharị weebụ. Ọ ike ịgbakwunye ma ọ bụ hichapụ ngwa ọdịnala na ekwentị gị site na weebụ na ga-mgbe niile na-egosi na dị ohere na gị SD kaadị na esịtidem ebe nchekwa. Ị ga-achọ eriri USB ọbụna ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-adịghị enịm nso. Mmekọrịta gị niile data gụnyere ndenye kalịnda, kọntaktị, foto, multimedia faịlụ, ụdaolu, ngwa ọdịnala na hazie ụdaolu, mbubata / mbupụ kọntaktị, transfer ma ọ bụ ịkọrọ multimedia faịlụ, ndetu, ma jikwaa ncheta ma na-ekwentị gị data haziri mfe site na AirDroid. Jiri desktọpụ gị ukwu ihuenyo maka-aza ozi ederede na AirDroid. Ihe niile na AirDroid na-aired bụghị wired. I nwekwara ike ịchọta ma ọ bụ igbachi gị Android ngwaọrụ ọ bụrụ na ọ na-efu.
No-nsogbu oge na ukwuu anabata web-dabeere User Interface.
Easy na-adaba adaba iji na nnukwu ihe oyiyi na ngwa ngwa nbanye / na-apụ atụmatụ.
Na-na-laa data management bụ omume.
Incredibly bara uru clipboard ọrụ.
Ikuku akụkụ bụ ya akpan owo.
Ọ dịghị foto kenha atụmatụ.
Mkpa netwọk ma na kọmputa na gị Android ngwaọrụ.
5. Wondershare MobileGo for Android - kacha mma SD kaadị Android njikwa maka ijikwa arọ data eruba
Maka ijikwa ibu nke photos, ebigh'ebi music listi ọkpụkpọ na mgbe niile ịgwakọta n'etiti ozi ederede na Android ngwa Wondershare MobileGo for Android bụ ihe kasị mma ngwa. Nke a SD kaadị Android njikwa akwado a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ tinyere mbadamba. Ị nwere ike mbupụ na mbubata imerime media faịlụ, na-na ndetu kọntaktị emelitere na-akpaghị aka ma gaa na ma site na Outlook. Ọ na-syncs na-enyefe data na ihe n'ụzọ dị egwu ngwa ngwa ọsọ. Ị nwere ike n'otu ntabi mmekọrịta ọtụtụ puku kọntaktsị na Outlook. Ọ atọghata gị PC n'ime ihe Android ekwentị na ị nwere ike mfe zipu ma ọ bụ-aza SMS.
Emepụta na mmelite backups nke kọntaktị, foto, ngwa ọdịnala na ozi ederede, wdg
Iweghachi data dị mfe.
Adịghị syncs photos onwe ya na Outlook.
Njikọ nwere ike furu efu mgbe ụfọdụ na ị gaghị enweta ozi ederede adọ.
Top 10 Android mmekọrịta Managers ka mmekọrịta Ihe niile na gam akporo Ngwaọrụ
Best 5 Android ndabere égwu
Android Photo ndabere: Ndabere Photo ka Google + na kọmputa Mfe
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si HTC sensashion
Download Music ka Android Kpọmkwem
Otú nyefee Photos si gam akporo ka Computer